प्रधानमन्त्री कप महिला क्रिकेट : लुम्बिनीलाई हराउँदै एपीएफ समूह विजेता ! - खेल खबर
पौष १३, दाङ। प्रधानमन्त्री कप महिला टि–ट्वान्टी क्रिकेट अन्तर्गत विभागीय टोली एपीएफ समूह एको विजेता बनेको छ । सोमबार भएको खेलमा एपीएफले लुम्बिनी प्रदेशलाई ६१ रनको अन्तरले हराएको हो ।
दाङको देउखुरी अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा एपीएफले दिएको १२३ रनको मध्यम लक्ष्य लुम्बिनी प्रदेशले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै मात्र ६१ रन बनाउन सक्यो ।
लुम्बिनीका लागि लक्ष्मि चौधरीले ११ रन बनाउन सफल भइन् । त्यस्तै सरस्वतीघर्ती मगरले ७ रन बनाउन सफल भइन् । यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले निर्धारित २० ओभरमा ४ विकेट गुमाउँदै रन बनाएको थियो । एपीएफका लागि ज्योती पाण्डेले सर्वाधिक ४९ रनको योगदान गरिन् । अर्धशतक बनाउनबाट एक रनले चुकेकी उनले ५४ बल खेल्दै १ चौकाको सहयोगमा ४९ रन बनाउन सफल भएकी हुन् ।
एपीएफका लागि इन्दु ब्रमाले २८ रन बनाउन सकिन् । त्यस्तै राजमती एरीले ११ रन बनाउनदा सरिता मगरले १० रन बनाईन् । बलिङतर्फ लुम्बिनी प्रदेशका लागि कप्तान नेरी थापाले दुई विकेट लिन सफल भइन् । त्यस्तै सरस्वती पुन र कृतिका मरासिनीले समान एक–एक विकेट हात पारिन् ।
आजको खेलमा जित निकाल्दै एपीएफ समूह ए को विजेता बनेको छ । एपीएफले समूह चरणका तीन खेल खेल्दै तीनै खेलमा जित निकाल्न सफल भउको हो । यता समूह चरणको तीन खेल खेलेको लुम्बिनीले दुई खेलमा जित निकाल्न सफल भएको हो । त्यस्तै लम्बिनीले एक खेलमा पराजय भोग्नु परेको हो ।
अब एपीएफले समूह बीको उप–विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशले समूह बीको विजेतासँग खेल्ने छ ।
प्रतियोगिता अन्तर्गत भोली (मंगलबार) दुई खेल हुनेछन् । बिहान ९ बजे हुने पहिलो खेलमा सुदूरपश्चिम प्रदेशले गण्डकी प्रदेशसँग खेल्नेछ । त्यस्तै दोस्रो खेलमा वागमती प्रदेशले प्रदेश १ सँग खेल्ने छ ।
फिफाले उमेर समूहको विश्वकप फुटबल रद्द गर्ने !
‘बी’ डिभिजन लिग फागुन ११ देखि !
रंगशाला निर्माणका लागि १० लाख सहयोग !
गोल्डेन फुटबल अवार्ड जित्ने रोनाल्डो पहिलो खेलाडी !
नेपालले अमेरिका र ओमानसँग एकदिवसीय क्रिकेट सिरिज खेल्ने !
राप्तीले जित्यो गौतम बुद्ध कप क्रिकेटको उपाधि !
गौतमबुद्ध कप टी–२० क्रिकेटको फाइनल आज !